An-tanety Sa An-dranomasina? Fanapahan-kevitra Sarotra Ho An’ny Mpitsoa-ponenana Te Hiala Ao Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2015 8:57 GMT
Tazana avy ao amin'ny trano lain'i Amer. Monina ao amin'ny toby miaraka amin'ireo mpitsoa-ponenana hafa ao ivelan'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka izy. Mangataka hahazo lalana azo antoka izy ireo mba handeha ho any Eoropa. Sary: Amer Mohammad. Nahazoan-dalana
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Angilee Shah ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 18 Septambra 2015 ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty
Manana fanapahan-kevitra horaisina i Amer Mohammad .
Raha monina ao anaty toby ny mpitsoa-ponenana, manao fihetsiketsehana sy mitaky fiampitàna azo antoka miala ao Torkia mankany Eoropa, tsy maintsy manapa-kevitra kosa i Amer raha hiandry ary mandra-pahoviana no iandrasany valiny amin'ny hoaviny. Nilaza izy fa nanambara ny Firenena Mikambana sy ny Ambasady Alemana fa mety haharitra an-taonany maro ny fahazoany antonta-taratasy hifindra, ary tsy misy ny antoka fa hahazo alalana handeha na aiza na aiza izy – na izay tiany aleha. Mandra-pahatongan'izany anefa, tsy mahazo miasa ara-dalàna ao Torkia izy.
Noho izany nanatevin-daharana ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao ivelany faran'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ao Istanbul izy. Nanatontosa sit-in nandritra ny efatra andro izy ireo ary namelatra trano lay tao amin'ny zaridaina kely manodidina ny gara. Tombanan'i Amer ho 1.000 eo ho eo ny olona tao amin'ny toby tamin'ny andro voalohany; nitatitra kosa ny media Tiorka sasany fa olona 3.000 no ao. Mitady lalana an-tanety mankany Eoropa ny mpitsoa-ponenana, izay avy ao Syria ny ankamaroany ary koa avy ao Iraka, Pakistan ary Afghanistan.
Maro tamin'izy ireo no nandeha fiara fitateram-bahoaka ho any Edirne, ao amin'ny sisintany grika. Saingy tsy mety mitondra olona ao amin'ny sisintany ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fiarakaretsaka, koa tafahitsoka ao ireo mpitsoa-ponenana. Ny hany fomba hafa dia amin'ny alalan'ny ranomasina, ao anaty sambo avy any Izmir.
Fantatr'i Amer fa olona 22 no maty an-drano tao amin'ny Ranomasina Égée tamin'ny Talata. Afaka mandray ny lalana an-dranomasina mankany Eoropa ihany koa izy. Mahatsiaro kivy izy. Tahaka ireo mpitsoa-ponenana hafa, tsy afaka miasa ara-dalàna ao Torkia izy. Monina any Alemaina ny fofom-badiny, hoy izy, ary te hamonjy azy any izy. Fehezin'ny fiarovana sy ny vavahady ny toby hoy izy. Tsy mahazo miverina izay rehetra lasa.
“Nilaza tamin'ny rahalahiko aho fa raha tsy avelan'izy ireo mandeha izahay dia hamonjy ny lalana an-dranomasina” hoy i Amer. Nilaza ny rahalahiny izay mijanona ao akaikin'ny gara ihany koa fa mampidi-doza izany. “Nolazaiko taminy fa noho ny fofombadiko no hanaovako izany. Raha te hijanona izy dia afaka mijanona.”
“Tsy hitako izay atao”
Nandositra an'i Iraka tamin'ny volana Jolay 2014 i Amer, tsy ela taorian'ny nibodoan'ny ISIS ny tanànan'i Ramadi. Nisotro dite tao an-jaridaina niaraka tamin'ny fianakaviany izy raha nanomboka ny fipoahana baomba, izay nandrava ny tranobe teo anoloan'ny trano. “Misy taim-baomba ao amin'ny ranjoko,” hoy izy.
Tahaka ireo mpitsoa-ponenana maro ao Torkia, mahazo vaovao be dia be amin'ny finday raitrany izy, ahitana lahatsoratra sy vondrona fifanakalozan-kevitra, izay izarany ny zavatra hitany ihany koa. Mifandray aminy amin'ny alalan'ny finday, Facebook sy fampiharana karajia aterineto, ary Viber izahay. Nangataka izy mba tsy hampiasa ny anarany izahay mba hiarovana ny fianakaviany ao Iraka sy tsy hanohintohina ny mety ahazoany visa.
Nifandray taminay amin'ny fampiasana ny finday raitrany i Amer, saingy mandany ora maro amin'ny famahana izany izy. Iray ihany ny toeram-pamahanana finday ho an'ireo olona monina ao amin'nytoby ivelan'ny fiantsonan'ny fitateram-bahoaka ao Istanbul, nilaza i Amer fa adiny iray ny famahanana hatreo amin'ny antsasany ny findainy. Sary: Amer Mohammad. Nahazoan-dalana
Rehefa tonga tao Ankara i Amer dia nisoratra anarana tamin'ny Firenena Mikambana ho mpitsoa-ponenana. Nolazain'ny Firenena Mikambana taminy fa mety miandry hatramin'ny taona 2020 ny fahazoan'ny fianakaviany fihaonana ahafahana miala ao Torkia. Sambany izy nandeha lavitra niaraka tamin'ny ray aman-dreniny sy ny rahalahiny roa. Tonga taty aoriana avy eo ireo anabaviny roa sy ny fianakavian'izy ireo. Napetraka ao Samsun, 600 kilaometatra miala ao Istanbul ao amin'ny morontsiraka avaratra izy ireo. Saingy te hihazo an'i Alemaina i Amer, te hihazo mafy an'i Eoropa izy sy ny rahalahiny.
Anabavy iray hafa no mijanona ao Iraka miaraka amin'ny havana zokiolona ao Haditha, ​​izay toeram-pamaharan'ny ISIS nanomboka tamin'ny volana Jolay.
Nilaza ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana fa eo amin'ny 2 tapitrisa eo ireo mpitsoa-ponenana nandao an'i Syria tonga ao Torkia, efa ho antsasaky ny isan'ny mpitsoa-ponenana voaisan'izy ireo ao amin'ny faritra. An'aliny hafa no tahaka an'i Amer, dia avy amin'ny firenen-kafa toa an'i Iraka, Iran na Pakistan.
Ny safidy hafa ho an'i Amer dia ny miandry ny fihaonana manaraka amin'ny volana Aprily hangatahana visa Alemà. Mila antonta-taratasy maro izy hanamarinana ny fiarahany amin'ny fofombadiny sy ny tantarany manokana, saingy sarotra ny mahazo ireo antonta-taratasy tena izy satria efa tsy miasa intsony ireo birao ao amin'ny tanàna nonenany tao Iraka. Tsy mino izy fa hahazo valinteny azo antoka. 25 taona izy ary te hanana fiainana. Nahazo mari-pahaizana momba ny simia tany amin'ny oniversite izy tany Iraka, talohan'ny nifehezan'ny ISIS ny tany andrefana ary nanana asa tsara izy sy ny fianakaviany.
“Noho izany ady izany, tsy manana asa izahay. Tsy manana loharanon-karena” hoy izy. Ao Torkia, niezaka nanao asa mandrera-batana amin'ny fanamboaran-trano izy mba hahazoam-bola, saingy ratsy dia ratsy ny fepetra, tsy misy fahazoan-dalana hiasa, matetika ataon'ny mpampiasa tsinontsinona ny mpitsoa-ponenana. Misalasala izy hiresaka ny hoaviny.
“Ny marina, tsy fantatro izay tokony hatao. Tena tiako ny solosaina. Tiako ny simia sy ny fitsaboana,” hoy i Amer.
“Fantatro fa mampidi-doza izany”
Saingy amin'ny fanombohana, te ho eo anilan'ny fofombadiny fotsiny izy. Nihaona tany am-pianarana tao Iraka izy ireo tamin'ny taona 2010, avy eo nankany Alemaina ny fofombadiny mba hianatra. Miezaka hatrany mba ho tafaraka nandritra ny fotoana ela izy sy Amer, hoy izy.
Niresaka ny fandehanana any an-kafa izy ireo, saingy nilaza i Amer fa raha nahita ireo fanehoan-kevitra momba ny vaovao tamin'ny aterineto, dia mihevitra izy fa tsy tongasoa ao amin'ireo firenena maro ny Arabo. “Sivifolo isan-jaton'ny fanehoan-kevitra – dia mankahala anay. Mihevitra izy ireo fa mpampihorohoro izahay. Na tonga hangalatra ny asan'izy ireo,” hoy izy.
Eo akaikin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, miantehitra amin'ny moskea ny mpitsoa-ponenana hamahanana ny findain'izy ireo sy hahazoana sakafo raha mety. Saingy tsy ampy ho an'ny rehetra ny sakafo sy ny rano, hoy i Amer. Tsy avelan'ny manampahefana hanaterana na inona na inona ao amin'ny toby, saingy tsy te hiparitaka ireo mpitsoa-ponenana raha tsy mahita fomba hankanesana any Gresy. Nilaza tamin'ny mailaka ny Tsinambolana Mena Tiorka fa nizara tavoahangy misy rano 3.000 sy bodofotsy 700 ary koa sakafo tao amin'ny toby izay miha-betsaka ao Edirne.
Nilaza ny governoran'ny faritany Edirne tamin'ny Alakamisy fa raha tsy miparitaka ao anatin'ny telo andro ny mpitsoa-ponenana, dia ho alefan'izy ireo any amin'ny firenena niavian'izy ireo na any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Tiorkia. Ho an'i Amer, tsy vahaolana izany. Toerana mahatsiravina ny tobin'ny mpitsoa-ponenana, hoy izy. Indrindra ho an'ny fianakaviana.
“Tsy hankany amin'ny toby izahay. Tsy afaka ho any amin'ny toby izahay. Tsy avelanay hanao izany izy ireo,” hoy izy. Nilaza i Amer fa nisy olona nanatona azy nilaza taminy hilomano any amin'ny nosy Grika iray; nieritreritra izany izy ary nanao fikarohana, saingy nahita fa mampidi-doza loatra izany. Mbola mihevitra ny handeha sambo izy, ary handao ny fianakaviany ao Torkia. Raha mahita olona mendri-pitokisana hanampy azy handeha.
“Fantatro fa mampidi-doza izany. Tsy manana zavatra betsaka ho ariana aho. Angamba ny fianakaviako no tsy hahita ahy intsony. Fantatro fa angamba tsy ho tonga aho. Tsy ho vatrako izany.”
Manana “usb” i Amer ao anaty paosiny. Tia solosaina sy famoronan-tsary izy. Saingy misy tanjona mampihoron-koditra kokoa ity fitaovana manokana ity: ahitana ny mombamomba azy rehetra sy taratasy ho an'ny fianakaviany sy ny namany raha sanatria izy maty any am-pandehanana.
“Hafatra ho an'izay olona mahita ny vatana mangatsiakako izany. Tsy fantatro fa [angamba] adala aho.”
Ho avy ny ririnina, mahatonga ny ranomasina tsy ho azo handehanana intsony izany. Atsy ho atsy, nilaza ny hijanona miaraka amin'ireo mpitsoa-ponenana hafa ao Istanbul izy, “na inona na inona hiafarany, na tsara na ratsy.”
“Tsy fantatro izay tokony hatao. Tena marina. Na ny fahavaloko aza tsy tiako ho eo amin'ny toerako.”